Ungayakha kanjani ama-backlink angenayo ngendlela efanele?
Ama-backlink ayadingeka kunoma yimaphi amabhizinisi e-intanethi. Abaphathi beWebhsayithi banelungelo lokuthola ama-backlink kumakhasi abo ewebhu ngoba angafaka imizamo ye-SEO futhi aphakamise isikhundla sewebhu. Kulezi zibuyekezo zokugcina zesilinganiso se-Google, abanikazi bewebhusayithi besaba ukudala ama-backlink aphezulu aphezulu ngoba angabangela ukuhlehla kwe-rankings nezinye izigatshana ze-Google. Yingakho bonke abakwa-webmasters befuna imithombo ephezulu ye-PR yokwakha ama-backlink kubo. Inombolo yale miithombo yewebhu ehloniphekile inqunyelwe, futhi kunzima ukuthola amathuba okuzwakalisa isixhumanisi kubo. Kodwa-ke, uma kungenakwenzeka ukuba inkampani yakho ibe nobuhlobo bebhizinisi namawebhusayithi aphezulu we-PR, akusona isizathu sokuhlanganyela kumasu wokuqhafaza okuxhunyaniswa nabo. Esikhundleni sayo, kufanele ufune ezinye izindlela ezikhohlisayo zokwenza ama-backlink aphezulu e-PR. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngendlela yokuthola i-backlink kusuka ku-PR10 site Wikipedia.
Kule minyaka, i-Wikipedia isibe yinkinga enkulu kubathengisi abaningi njengoba kungenakwenzeka ukungena kulo mthombo ku-Google. Noma kunjalo, lo mncintiswano ongunaphakade angase alethe inzuzo ebhizinisini lakho ngesimo sezingqinamba ezingenayo ezingenayo. I-Wikipedia ingasetshenziselwa abathengisi bokuqukethwe kokubili kokusiza nge-search engine nokwenza ngcono ekuthumeni komthombo omkhulu wemfundo emhlabeni.
Abantu ngokuvamile abaqondi kahle indima ye-backlink ku-Wikipedia. Abaningi babo bacabanga ukuthi kwanele ukungeza isixhumanisi sabo "kusixhumanisi sangaphandle" uma okuqukethwe kubalulekile kumbonisi wabo webhusayithi. Kodwa-ke, empeleni, ayinandaba nhlobo. Uma unendlela ehlakaniphile yokwengeza i-backlink yakho ku-Wikipedia, izokulethela imiphumela eminingi emihle. Ngokuphambene nalokho, kungabangela izinkinga eziningi, kufaka phakathi nesizinda sakho esingeziwe esibekwe njengogaxekile futhi sivinjelwe kusuka ku-Wikipedia.
Kulesi sihloko, ngizokwabelana nawe ngemikhuba emihle kuma-backlinks e-Wikipedia. Ngakho-ke, uma kwenziwa kahle, kusengaba yinzuzo enkulu ekuthuthukiseni injini yakho yokusesha isayithi.
Ama-backlink ashintshwe kanjani ku-Wikipedia kule minyaka eyishumi edlule?
i-Wikipedia yasungulwa ngo-2001 njengomthombo omkhulu wewebhu wezemfundo emhlabeni. Ngaleso sikhathi ukubuyiswa kwe-backlink ukuthenga namanye amasu wokwakha isixhumanisi se-spammy ayengathandwa kakhulu. Yingakho kwavunyelwa ukuthi wonke umuntu enze ukulandelana kwe-backlink ku-Wikipedia. Kodwa-ke, nge-Google's heavy weighting ye-Wikipedia kanye ne-backlinks yayo, abakwa-webmasters basheshe baphumele emphumela we-SEO. Kusukela ngaleso sikhathi, i-Wikipedia ishintshile isimo sengqondo sokwakha ama-backlinks angemuva kumakhasi ayo. Ukuze uvimbele ukuhlaselwa okukhulu kogaxekile kanye nokuphulwa komhlahlandlela we-Google, i-Wikipedia ivumela ukubeka kuphela izixhumanisi ezingalandeli okungahambisani nanoma iyiphi i-juice yokuxhumanisa. Ngaphezu kwalokho, i-Wikipedia idala uhlu lokulandelana ngenhloso yokuvimbela izizinda ezibheke njengogaxekile.
Ngisho noma kungabikho ukulandelela emuva kwe-backlink kunomthelela omncane ku-SEO kunokwenza okulandelayo, i-Wikipedia backlinks namanje yinto efunwa kakhulu emakethe yedijithali. Kungachazwa nge-PageRank ephakeme yalomthombo kanye nesimo sengqondo esifanele se-Google kuzixhumanisi ezivela kulo mthombo Source .